नेपालमै भारतीयको घेरा हाले सांसदलाइ !::देश र जनताप्रति समर्पित
नेपालमै भारतीयको घेरा हाले सांसदलाइ !
नरैनापुरमा हाटबजार लागेको थियो । हाटबजारमा भारतीय पसले र किनमेल गर्न आउनेको संख्या ठूलै थियो । हाटबजारमा पसल थाप्न आएका भारतीय नागरिक देवीदिन विश्वकर्माको साथबाट ५ किलो चरेश फेला प¥यो । प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लियो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
आज मोहिनी एकादशी वर्षकै उत्तम दिन के गर्दा फल प्राप्त हुन्छ
मासुु खाए ५० हजार जरिवाना, सुराकी दिनेलाई १५ हजार पुरस्कार गाउपालिकाको निर्णय
जुम्ल्याहा बच्चाको फरक-फरक पिता कस्तो अचम्म
नेकपा सांसद न्युरोडमा लुटिइन , पर्समा के के थ्यो !